Voasakana tsy hiteny teo anivon’ny Firenena Mikambana ny solontena malagasy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Septambra 2009 7:51 GMT
Nandray kihon-dalana vaovao indray ny kizo politika mihatra eto Madagasikara. Tao anatin'ny tetika hampana-kery ny fitondrana malagasy tohanan'ny miaramila eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, dia efa tafiditra handray fitenenana mandritra ny fivoriamben'ny Firenena Mikambana ao New York ny mpitondra an'i Madagasikara ankehitriny, Andry Rajoelina, tamin'ny alakamisy teo, saingy tsy afa-nandray fitenenana. Nampidirina handray fitenenana indray ny lehilahy ny zoma saingy, nanambara ampahibemaso ny fanoherany ny handraisany fitenenana manoloana ny fivoriambe ny solontenan'i Repoblika demaokratikan'i Kôngô, misolo tena ny Southern African Development Community (SADC) raha iny handray fitenenana iny indrindra izy. Natao ny fandatsaham-bato(fr) ka ny valin'izany dia 23 no nanohitra ny hikabarian- dRajoelina, 4 no nanaiky ary 6 no tsy nilaza ny heviny. Voamariky ny fandresen-dahatra araka ny voalazan'ny lalàna ny nanaovana azy ary tsikaritra ny fisavoritahana raha arahina ny lahatsary navoakan'ilay mpamaham- bolongana Malagasy vatofototra:
FIZARANA 2-Fanakanana an'i Andry RAJOELINA teo amin'ny Firenena Mikambana 25 sept 2009
nampidirin'i vatofototra. – Jereo ny lahatsary farany.
Maro tamin'ny mpamaham-bolongana sy mpisioka an-tserasera Malagasy no nanaraka tamin'ny alalan'ny fandaharana mivantana an-tsarin'ny Firenena Mikambana sy nisioka (ni-twit) ihany koa fa niditra amin'ny fiolahana tsy fantatra indray ny krizy eto Madagasikara.
Raha hiakatra ny sehatra Rajoelina no nanamarika ny mpamaham-bolongana Malagasy Aliotsy:
Niantso ny firenena mpikambana (ao amin'ny SADC sa ONU?) hivoaka ny solontenan'i Kôngô raha vao miteny eo Rajoelina. http://www.un.org/webcast/ #Madagascar #fb.
Sanganehana ihany i Rashaja:
Mampihomehy ihany ny toe-draharaha amin'izao fotoana izao…mikorontana sy misavoritaka tanteraka. Tsy ampy traikefa ve ny filoha sy ny mpanolotsainan'ny fotoana? #UN #Madagascar
Nanampy i Samganegie (fr):
président de l'assemblé est même sorti de sa tribune, et ses assistant sont completement paumés !!#madagascar .
Nivoaka ny sehatra mihitsy ny filohan'ny fivoriambe. Very hevitra tanteraka ny mpanampy azy !
Mifokofoko amin'ny toe-draharaha politika eto Madagasikara i Streetrover :
Nangarihana tao @ Firenena Mikambana Atoa Rajoelina, notononina ampahibemaso ho tafiditra amina kolikoly iraisam-pirenena ny androtr'io ihany koa ny masoivohony ao @ Firenena Mikambana! mila miato kely aloha i #madagascar.
Nitovy hevitra i HairyT sy i Solofo nilaza fa andro matroka eo amin'ny tantaran'i Madagasikara izao:
RT @solofo: Henatra ho an'i #Madagascar . Tsy raharahako ny tsy nahazoan-d #Rajoelina niteny teo anoloan'ny Firenena Mikambana.
Nanamarika ity toe-javatra ity koa ny bolongana mpanohana ny fitondrana Madagate (fr):
Efa any amin'ny vanim-potoan'ny lasa sahady io fotoana mahasosotra ao anatin'ny tantaran'i Madagasikara io. Tsy maintsy hisy farany rahateo ny krizy na ho inona na ho inona no hitranga. Fa amin'izao fotoana izao dia mipaka lalina amin'ny Malagasy eto Madagasikara iny noho ny sangodim- panina isan-karazany.
Mandritra izany fotoana izany, velona indray ny rotaka rehefa nandamoka ny tany amin'ny Firenena Mikambana. Namoaka tao amin'ny twitter i Investgasy fa:
Raikitra indray izao ny fipoapoahana ao Anosy (Tana), feno 4×4 mitondra fitaovam-piadiana ny tanàna.
Nohamarinin'ny Reuters avy eo ny tatitra, milaza ny fandefasana baomba mandatsa-dranomaso sy tifitra fampitandremana natao tamin'ny mpanao fihetsiketsehana.
Farany i Jentilisa dia nitatitra fa mitaky ny hampiharan-dRajoelina ny fampanantenana natao taminy ny tanora rezervista niara-nitolona taminy tany ampiandohan'ny krizy(mg):
Tsy asiana resaka lava intsony ny tany New York fa na inona na inona fironana politika ananana dia tsy azo ekena mihitsy ny fanitsakitsahana ny maha Malagasy antsika. Izay faly tamin’ireny dia mety tsara aminy ny mitady zom-pirenana hafa toy ny mifindra any Congo ohatra. Vonona handray azy tsara ny any.
Inona ary no tokony hatao: miantso ny Malagasy rehetra izahay mba hamoaka ny sainam-pirenena Malagasy– hanofahofa, hanangana, hitondra an’izany amin’ny 06 Oktobra. Tsy mampaninona izay tohananao na i Andry na Ra8, na Deba, na Zafy, na ny tenanao, fa andao aseho fa Malagasy isika ary reharehantsika izany. Miangavy ihany koa izahay ho an’ny mpanao fandaharana amin’ny radio rehetra mba handefa hira izay maneho sy mamoha ny fitiavan-tanindrazana mandritra io tontolo andro io, eny fa na dia ny andro mialoha an’io aza.
Azafady mba aelezo amin’ny sehatra rehetra mba ho re-tany sy ren-danitra ity antso avo ity. Hatsangana ny saina Malagasy na amin’ny toerana aiza na amin’ny toerana aiza mba ho hitan’ireo izay vahiny ho avy eo ny atao hoe hambom-po Malagasy. Aleo koa ho hitan’ny havany eo izay Malagasy maniry hifindra any Congo.
Gasy aho ary reharehako izany. Mitsangana aho miaro ny voninahitra sy ny hasin’ny tanindrazako.
02 Oktobra 2009, 16:27
ampangino ny ambom-po diso fiantefa fa rariny sy manaja tanteraka ny teny nifanaovana ny sadc ka tsy manaiky havilivilin’ ny mpanongampajakana indrindra eo imason’ny fivoriamben’ny firenena mikambana.
soa fa misy ny olona sy fikambanana mahay manaja ny teny nifanaikeny.
05 Oktobra 2009, 21:09